हाँस्यकलाकार तथा राइटर लिलिपुट : ऋणका डुबेका कारण अाफ्नो जेठी छोरीको घरमा बस्न बाध्य - Everest Dainik - News from Nepal
हाँस्यकलाकार तथा राइटर लिलिपुट : ऋणका डुबेका कारण अाफ्नो जेठी छोरीको घरमा बस्न बाध्य
मुम्बई, मंसिर २ । कुनै समयमा चर्चित रहेका राइटर र हाँस्यकलाकार लिलिपुट आज कामको लागि भौंतारिरहेको छ । उनी ऋणमा डुबेका कारण आफ्नो जेठी छोरीको घरमा जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
मुम्बई मिररको खबरअनुसार, यस्तो खुलासा स्वयं लिलिपुटले नै गरेका छन् । लिलिपुटका खास नाम चाहिं एमएम फारुखी हो र उनले ९० दशक ‘पपुलर कमेडी शो’ ‘देख भाई देख’ को राइटरको रुपमा चिन्ने गर्दथे । आज कामको खोजीमा भौंतारिरहेको छ, लिलिपुट ।
याे पनि पढ्नुस आफ्नो छोरी प्रियंकाको जोडी विदेशी भएको म कल्पनासम्म गर्न सक्दिनँ
करिब पाँच वर्षदेखि लिलिपुटका अनुसार– ‘उनको लागि यो समय निकै भयावहको अवस्था रहेको छ । उनी ऋणमा डुबेको छ र उनलाई काम पाउन निकै कठिनाई परिरहेको छ ।
– बकौल लिलिपुट, ‘पछिल्लो एक वर्षदेखि दुई स्क्रिप्ट्स लिएर म निर्माताको अफिसको चक्कर काटिरहेको छु । तर कोही कोही भन्छन््– हेर्ने छु र सोच्ने छु । कोही जिस्क्याउने, गिज्याउने गर्दथे कि जो कोही पनि निर्देशक बन्न आउने गर्दछन् ।
याे पनि पढ्नुस जरिन खान १०० किलोबाट ५७ केजीमा कसरी पुगिन् ? यस्तो छ रहस्य !
अाफूले गरेको भूमिका सम्झना गर्दै
– लिलिपुटले भनेका थिए, ‘ए, तपाईं सिरियस भूमिका पनि गर्न सक्नुहुन्छ हो । म सोच्ने गर्दथे कि बौने सिर्फ कमेडीको लागि बनेको हुँ ।’
– यतिमात्र होइन कि, लिलिपुटको अनुसार ‘एक अन्य हाइली एजुकेटेड कलाकारले जोक पनि गर्दछन् कि लिलिपुटका पेजर नम्बर पनि उनीभन्दा लामो छ । यतिबेला मैले जवाफ दिए– ‘कुनै व्यक्तिको जवाफ पनि मभन्दा लामो छ, अब के गर्न सक्छु त ।’
याे पनि पढ्नुस सुपरस्टार शाहरुखलाई एकैसाथ तीनतीन वटा खुशी, सेलिब्रेट गर्न यसरी सजाए बंगला (तस्वीरहरु)
१९७५ मा मुम्बई आएका थिए लिलिपुट
– लिलिपुटले बताएअनुसार, डिसम्बर १९७५ मा जब म मुम्बई आएँ तब म पहिलो चोटी कलाकार बनेको थिए र मैले निर्णय गरेको थियो कि स्वयंलाई ब्राण्ड बनाउने छु । मैले सोचे कि बलिउड जस्तो यस्तो ठूलो चलचित्र उद्योगमा मजस्तो बौनेको रमाइलो भूमिका मिल्ने छ । त्यसैले नाम लिलिपुट राखें र अडिसन दिन सुरु गरें ।
ट्याग्स: bollywood, comedian